သမ္မာကျမ်းစာ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > ကမျြးစာကို
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏မှုတ်သွင်းခံနှုတ်ကပတ်တော်၊ ဧဝံဂေလိတရား၏ သစ္စာရှိသက်သေခံချက်၊ နှင့် လူသားထံ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်၏ စစ်မှန်ပြီး တိကျမှန်ကန်သော မျိုးပွားမှုဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာများသည် အယူဝါဒနှင့် ဘဝမေးခွန်းများအားလုံးတွင် အသင်းတော်အတွက် အတုမရှိမဖြစ် အခြေခံကျပါသည်။ သခင်ယေရှုက ဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့ ယေရှု သွန်သင်ခဲ့တာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။ ဧဝံဂေလိတရားသည် အစစ်အမှန်ဟုတ်၊ မဟုတ်မမှန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ သင်ကြားရေးနှင့် ဘဝအတွက် ခိုင်လုံသောအခြေခံကား အဘယ်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာအတွက် မှုတ်သွင်းခံနှင့် မမှားနိုင်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ (2. တိမောသေ 3,15နှစ်ဆယ် 2. ဓာတ်ဆီ 1,20စာ-၁၁; ယော ၁7,17)
သခင်ယေရှုကျမ်းစာသွန်သင်ချက်အများစုကိုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မမူဟုပြောဆိုသောကျမ်းပညာရှင်အုပ်စု "Jesus Seminary" နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းစာများကိုသင်မြင်ဖူးပေမည်။ သို့မဟုတ်သမ္မာကျမ်းစာသည်ဆန့်ကျင်မှုများနှင့်ဒဏ္sာရီများစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသောအခြားပညာရှင်များအကြောင်းကိုသင်ကြားဖူးပေမည်။
ပညာတတ်လူများစွာသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ အညီအမျှပညာတတ်သောအခြားသူများက၎င်းသည်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာနှင့်ပြောဆိုရာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရာဇဝင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုရာကိုကျွန်ုပ်တို့မယုံလျှင်၊ သူ့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမသိရှိနိုင်ပါ။
ယေရှု၏ဟောပြောပွဲသည်ယေရှုသင်ကြားမည့်အရာကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီပုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုလက်ခံပြီးမကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုပယ်ချခဲ့တယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီယေရှုကိုလက်တွေ့ကျကျဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျမြင့်မားသောမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီးလစ်ဘရယ်သိပ္ပံပညာရှင်များစွာပင်ယေရှု၏ဆွေးနွေးပွဲနှင့်သဘောမတူညီပါ။
သခင်ယေရှု၏ကျမ်းစာမှတ်တမ်းများကိုယုံကြည်စိတ်ချရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ မျက်မြင်သက်သေတွေအသက်ရှင်နေတုန်းယေရှုသေဆုံးပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာသူတို့ရေးခဲ့တယ်။ ဂျူးတပည့်များသည်သူတို့၏ဆရာများ၏စကားကိုနှလုံးသားဖြင့်သင်ယူလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်သခင်၏သွန်သင်ခြင်းကိုလုံလောက်သောတိကျမှန်ကန်စွာလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပုံရသည်။ အစောပိုင်းချာ့ချ်တွင်အရေဖျားလှီးခြင်းပြsettleနာကိုဖြေရှင်းရန်စကားလုံးများကိုသူတို့တီထွင်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ယင်းကသူတို့၏မှတ်တမ်းများသည်ယေရှုသွန်သင်ပေးရာကိုတိကျစွာရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ယေရှုသည်ကိစ္စရပ်များစွာနှင့်ဖာရိရှဲများနှင့်အငြင်းပွားရန်အသင့်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပြoneနာတစ်ခုမှာကျမ်းစာ၏ဖွင့်ပြခြင်းလက္ခဏာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအပေါ်အမြင်များကိုမကြာခဏယူလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဂျူးယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်သမ္မာကျမ်းစာသည်ယုံကြည်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့သည်။
Jesus erwartete, dass jedes Wort der Schrift in Erfüllung ging (Matthäus 5,17-18; Markus 14,49). Er zitierte aus der Schrift, um eigene Aussagen zu untermauern (Matthäus 22,29; 26,24; 26,31; ယော 10,34); er tadelte Menschen dafür, dass sie die Schrift nicht genau genug gelesen hatten (Matthäus 22,29; လုကာ ၂4,25; ယော 5,39). Er sprach von alttestamentlichen Personen und Ereignissen ohne die leiseste Andeutung, dass es sie nicht gegeben haben könnte.
Hinter der Schrift stand die Autorität Gottes. Den Versuchungen Satans hielt Jesus entgegen: «Es steht geschrieben» (Matthäus 4,4-10). Allein dass etwas in der Schrift stand, machte es für Jesus unanfechtbar autoritativ. Die Worte Davids waren vom Heiligen Geist inspiriert (Markus 12,36); eine Prophezeiung war «durch» Daniel gegeben worden (Matthäus 24,15), weil Gott ihr wahrer Ursprung war.
မဿဲ ၂9,4-5 sagt Jesus, der Erschaffer spreche in 1. ကြွက် 2,24: «Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.» Die Schöpfungsgeschichte schreibt dieses Wort jedoch nicht Gott zu. Jesus konnte es Gott zuschreiben, einfach deshalb, weil es in der Schrift stand. Zugrunde liegende Annahme: Der eigentliche Verfasser der Schrift ist Gott.
Aus allen Evangelien geht hervor, dass Jesus die Schrift als zuverlässig und vertrauenswürdig betrachtet hat. Den Menschen, die ihn steinigen wollten, hielt er entgegen: «Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden» (Johannes 10, 35). Jesus hielt sie für vollgültig; er verteidigte sogar die Gültigkeit der Gebote des Alten Bundes, während der Alte Bund noch in Kraft war (Matthäus 8,4; 23,23).
Wie ihr Lehrer hielten auch die Apostel die Schrift für autoritativ. Sie zitierten sie häufig, oft zur Untermauerung eines Standpunktes. Die Worte der Schrift werden als Worte Gottes behandelt. Die Schrift wird sogar personalisiert als der Gott, der in wörtlicher Rede zu Abraham und zum Pharao sprach (Römer 9,17; ဂလာတိ 3,8). Was David und Jesaja und Jeremia schrieben, ist eigentlich von Gott gesprochen und deshalb gewiss (Apostelgeschichte 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; ဟီး 1,6နှစ်ဆယ် 10,15). Das Gesetz des Mose, so wird unterstellt, reflektiert die Gesinnung Gottes (1. ကောရိန္သု 9,9). Der eigentliche Verfasser der Schrift ist Gott (1. ကောရိန္သု 6,16; ရောမ 9,25).
Paulus nennt die Schrift das, «was Gott geredet hat» (Römer 3,2). Laut Petrus haben die Propheten nicht «aus menschlichem Willen» gesprochen, «sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet» (2. ဓာတ်ဆီ 1,21). Die Propheten haben es sich nicht selbst einfallen lassen – Gott hat es ihnen eingegeben, er ist der eigentliche Urheber der Worte. Oft schreiben sie: «Und das Wort des Herrn erging…» oder: «So spricht der Herr…»
An Timotheus schrieb Paulus: «Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit ...» (2. တိမောသေ 3,16, Elberfelder Bibel). Allerdings dürfen wir hier nicht unsere modernen Vorstellungen davon, was «Gott-gehaucht» bedeutet, hineinlesen. Wir müssen daran denken, dass Paulus die Septuaginta-Übersetzung meinte, die griechische Übersetzung der hebräischen Schriften (das war die Schrift, die Timotheus von Kind auf kannte – Vers 15). Paulus benutzte diese Übersetzung als das Wort Gottes, ohne damit sagen zu wollen, dass es ein vollkommener Text sei.
Trotz der übersetzerischen Diskrepanzen ist er Gott-gehaucht und «zur Erziehung in der Gerechtigkeit» nütze und kann bewirken, dass «der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt» (Vers 16-17).
“ ဆူညံသံ” ကြားမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘုရားသခင်ကြားရှိလျှို့ဝှက်ထားသောလူ့အမှားများရှိသော်လည်းသမ္မာကျမ်းစာသည်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မှန်ကန်သောအပြုအမူအကြောင်းပြောရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဘုရားသခင်ကသူလိုချင်တာကိုကျမ်းစာဖြင့်ရရှိသည် - ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်၊ သူတောင်းသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင်လုံလောက်သောရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံနီးကပ်စေသည်။
ကျမ်းစာသည်ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုဘာသာပြန်ခြင်းပုံစံဖြင့်လည်းပြည့်စုံစေသည်။ ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်ထက်ပိုပြီးသူမျှော်လင့်တာကငါတို့အမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာပြbook္ဌာန်းစာအုပ်မဟုတ်ပါ။ ဖောင့်၌ပေးထားသောကိန်းဂဏန်းများသည်ယနေ့ခေတ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရသင်္ချာနည်းအရအမြဲတိတိကျကျမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာ၏ကြီးမြတ်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သွားရမည်။
ဒီဟာဆန့်ကျင်မှုလား? နည်းပညာအရ။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်မူအရမှန်သော်လည်းအသေးစိတ်မှာမပါ။ ဟုတ်တယ်၊ လုကာကဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့အခါရလဒ်ကိုကိုက်ညီဖို့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုအလွယ်တကူဖော်ထုတ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး။ သူသည်စာဖတ်သူများသည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်တိကျမည်ဟုမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ ဤသည်ကသမ္မာကျမ်းစာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံး၌တိကျမှန်ကန်မှုကိုမမျှော်လင့်ရန်သတိပေးသင့်သည်။
Wir müssen den Blick auf den Hauptpunkt der Botschaft richten. In ähnlicher Weise machte Paulus einen Fehler, als er 1. ကောရိန္သု 1,14 schrieb – ein Fehler, den er in Vers 16 korrigierte. Die inspirierten Schriften enthalten sowohl den Fehler als auch die Korrektur.
လူအချို့ကကျမ်းချက်များကိုယေရှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ တစ်ခုမှာလူသားစကားဖြင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူဇာတိအဖြစ်ဖြစ်စေသည်။ ယေရှုသည်အပြစ်ကင်းမဲ့သောကြောင့်စုံလင်သူဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူသည်မည်သည့်အခါကမျှအမှားမကျူးလွန်ခဲ့ပါ။ ကလေးတစ် ဦး အနေနှင့်အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သဒ္ဒါအမှားများနှင့်လက်သမားအမှားများပြုလုပ်မိနိုင်သော်လည်းထိုသို့သောအမှားများသည်အပြစ်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အပြစ်ကင်းသောယဇ်အဖြစ်ဖြစ်ရန်ယေရှု၏ရည်ရွယ်တော်မူချက်ကိုမဖြည့်ဆီးခဲ့ကြပါ။ အလားတူစွာသဒ္ဒါအမှားများနှင့်အခြားအသေးစိပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သမ္မာကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမထိခိုက်စေပါ။ ခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းမည်သူမျှသက်သေမပြနိုင်ပါ။ ပရောဖက်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာပြည့်စုံကြောင်းသင်သက်သေပြနိုင်ပေမည်၊ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးသည်တူညီမှုရှိကြောင်းသင်မသက်သေပြနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်း၏မေးခွန်းသာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့်တမန်တော်များသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းသမိုင်းအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်သခင်ယေရှုတပါးတည်းသာရှိသည်။ အခြားအတွေးအခေါ်များသည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမဟုတ်ဘဲအထောက်အထားအသစ်များမဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တပည့်တော်များအားအမှန်တရားအသစ်သို့လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုသခင်ယေရှု၏သွန်သင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။ ဘုရားသခင့်အခွင့်အာဏာဖြင့်စာရေးရန်ပေါလု၏ပြောဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်။ ဘုရားသခင်ကဘယ်သူလဲ၊ ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသမ္မာကျမ်းစာကဖွင့်ပြတာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါတယ်။
ခရစ်ယာန်များသည်သမ္မာကျမ်းစာသည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသက်အတွက်အသုံးဝင်ကြောင်းရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်တွေ့ရှိခဲ့သောချာ့ချ်သမိုင်းကြောင်း၏သက်သေကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်။ ဤစာအုပ်ကဘုရားသခင်သည်မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူလုပ်ပေးခဲ့သည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်သင့်ပုံကိုပြောပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်မည်သည့်စာအုပ်များသည်ကျမ်းစာရင်းမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းကိုလည်းရိုးရာအရသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်တည်နိုင်ရန်အတွက်ကျမ်းရင်းဝင်ဖြစ်စဉ်ကိုဘုရားသခင်ညွှန်ကြားနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကသမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားကိုလည်းပြောဆိုသည်။ ဒီစာအုပ်ကစကားလုံးတွေကိုမဖော်ပြဘူး၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောသေခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာခွန်အားကိုပေးသည်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသမ္မာကျမ်းစာကသမ္မာကျမ်းစာကသက်သေထူသည်။ သမ္မာကျမ်းစာရေးသားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏စကားလုံးများကိုမပြောနိုင်လောက်သောခံစားချက်များဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်ဘုရားသခင့်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောပြခြင်းအားဖြင့်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအခွင့်အာဏာနှင့်ဆိုင်သောဤအယူအဆများကိုသံသယ ၀ င်သူများအားသက်သေမပြနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည့်အခါကျမ်းချက်များကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည်သူရဲကောင်းများကိုမလှပစေပါ။ ဒါကသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်လက်ခံဖို့ကူညီပေးတယ်။ အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ်၊ theသရေလလူတို့၏တပည့်များ၏အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ပြည့်စုံသောနှုတ်ကပတ်တော်၊ လူဇာတိကိုခံယူပြီးဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ယှဉ်သောtheဝံဂေလိတရားကိုသက်သေခံသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည်ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်၊ သူမကိုယ်တိုင်မလွယ်ကူပါ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ပcovenantိညာဉ်အဟောင်းကိုဆက်လက်တည်ရှိပြီးဖျက်သိမ်းသည်။ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးဝမပါဘဲလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရန် ပို၍ တောင်းဆိုသည်။ အလားတူပင်ယေရှုကိုဟေဗြဲ၊ ဂရိနှင့်ခေတ်သစ်အတွေးအခေါ်နှင့်မကိုက်ညီသောတစ်ချိန်တည်းတွင်လူသားနှင့်ဘုရားသခင်အဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ ဤရှုပ်ထွေးမှုကိုအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုမသိဘဲမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည်အတုအယောင်စာအုပ်ဖြစ်သည့်အပြင်အတုပြုလုပ်လိုသောသို့မဟုတ်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုသောပညာမတတ်သည့်သဲကန္တာရမှရေးသားရန်ခဲယဉ်းသည်။ ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းစာအုပ်တွင် ပို၍ လေးနက်စေသည်။ ၎င်းသည်တပည့်တော်များ၏သက်သေထွက်ဆိုချက်နှင့်ဘုရားသခင့်သားတော်အသေခံခြင်းအားဖြင့်သေခြင်းကိုအောင်နိုင်ခြင်း၏မမျှော်လင့်သောယုတ္တိတန်သောသက်သေဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်အကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို၊ ဘဝ၊ အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားခြင်းမှာအကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းထုတ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားနေရာကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပေးတာကြောင့်ပါ။ သီအိုရီဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်အားလုံးအပြင်သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးထက်မိမိကိုယ်ကို "အပြစ်လွှတ်သည်"
ကျမ်းစာနှင့်အစဉ်အလာ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား၏သက်သေထွက်ဆိုချက်များသည်အခွင့်အာဏာနှင့်ဆိုင်သောသမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည်။ သူမသည်ယဉ်ကျေးမှုနယ်နိမိတ်များတစ်လျှောက်စကားပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ သူရေးထားသည့်အချိန်တွင်မတည်ရှိခဲ့သည့်အခြေအနေများကိုသူမကပြောဆိုခြင်းသည်သူမ၏တည်မြဲသောအခွင့်အာဏာကိုလည်းသက်သေထူသည်။ သို့သော်ယုံကြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးကျမ်းစာအထောက်အထားမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့၏အကူအညီဖြင့်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးအသက်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။